Sawirka Maanta: Tanina ma wax qarsi baa (Privacy) ? Daawo yaabka sawirkan – SBC
Sawirka Maanta: Tanina ma wax qarsi baa (Privacy) ? Daawo yaabka sawirkan
Posted by editor on Maarso 3, 2012 Comments
Dad badan oo dinida ku nool ayay ka joogtaa heer la yaab leh inay qarsadaan arimahooda gaarka tiiyoo ay u marayaan wax kasta oo ay daaha ku saaran, waxaase taasi ku lamaansan kuwa badan oo wax qarsi iska daayee waxba lagu aamin karin.
Hadaba dadka faraha badan ee ay ka joogto yaan arimahaasi la arkin, yaan lagu soo fara gashan iyo yaan waxba lagaa ogaanin ayaa dabacadahooda waxaanay uga harin hadii ay socdaan, hadii ay gaari la socdaan, hadii ay fadhiyaan, taagan yihiin ama ay shaqo ku jiraan, waxaaba sii dheer kuwa fadhiga guriga ama diyaarada marba dhinac ula jeesta hadii ay ahaan laheyd qoraal ay qorayaan, loo soo qoray, mobile ama lab top IWM.
Sawirka maanta aan idiin soo xulnay ayaa ah sawir qiso ahaan aad inoo cajibiyey isla markaana laga dheehan karo qofka uu ku saabsan yahay in heerka wax qarsigiisu uu ku dhaw yahay in naftiisa uu kala ilaaliyo.
Sawirka sidaad u jeedaan waxaa ka muuqda nin ku safraya diyaarad, ninkaasi wuxuu ku fadhiyaa kurigiisa wuxuu isticmaalaya ama adeegsanayaa computer lat top ah, qofka la fadhiya ama kuwa kale ee geesha ka fadhiya iyo ka gadaal ka fadhiya iyo dadka diyaarada dhex socda ayuu ninkaasi maaro iyo taag uga waayey in uu ilaashado waxa uu ku mashquulsan yahay ee lap top-ka uu ka adeegsanayo wixii ay doonaan ha noqdeene.
Ninkaasi sida sawirka laga dhadhan karo wuxuu ugu dambeyntii in uu wax qarsado ka gaartey in uu inta siibo funaanadii kuwa dhaxanta loogu tala galay oo uu sitay in uu ku qariyo cumputer-ka, waliba intaasi uguma harine si uu isagu uu la socdo arimihiisa ayuu madaxa ama qoorta wuxuu gashaday sida aad u jeedaan funaanada, isagoo madaxii, gacmihii iyo kumbuyutarkii ku hoos qariyey marada taasi oo ka dhigan in wax alla iyo wixii uu wato aanay cidina uga jeedin.
Laakiin sida sawirka ka muuqata ninkaasi waxaa la is oran karaa isagaa cuqdad nafsi qabee cidna dan iyo heelo kama laha hawlihiisa gaarka ah, maadama sida sawirka ka muuqata dadka la fadhiya iyo kuwa xaga dambe ka fadhiya ay u muuqdaan dad daalan oo ku caajisan safarka diyaarada oo ay tooda haysato ninkanna uu meel cidlo ah ka diday.
FIKIR KA SOO BIXI (HAVE YOUR SAY): Ninkan talaabadan ma ku saxan yahay oo in uu arimahiisa qarsado ma wax wanaagsanbaa mise waa uu ka sii badbadiyey oo cuqdad iyo iga ilaali ayuu qabaa maxay kula tahay, ku soo bixi comments-ka hoos. Mahadsanid.
Fiiro gaar ah: Hadii ay jiraan sawiro ku cajab galiyey oo ay tahay in bulshada aad la wadaagto ama aad adiguba qaaday fadlan ku soo dir webmaster@allsbc.com
maxamed bosaso says:
Maarso 3, 2012 at 6:31 pm
kkkkkkk fikirka aan qabo waa nin ay dantu ka aadkaatay ooo waxyaabo farxad galiyey ama uu ka naxay uu qarinayo kk waa layaab
kaptan curane, sharmaake mohamud says:
Maarso 3, 2012 at 7:14 pm
film xun ayuu daawanayaa ayaa lagayaabaa kkkkkkkk . sida xxx……..m
Maarso 4, 2012 at 8:52 am
wax wanagsan maha. in aad kaduwanato bulshada aad lasafraysid. ama aad la nooshahay. hadii aad wax ka duwan keento waxaa kuwada firinaya indhaha calamka. waxana laga yaba hadi lawaydiyo sababta. in anu bixin wax lagu qanci karo . waxaa lagaya in uu ku jawaabo waan ka helaa oo kaliya